Homeमनोरञ्जन‘छ मा या छ पक्कै’ को स फलताप छि केकीलाई भ्या इनभ्याइ !
काठमाडौ । लगातार फिल्म असफल भएर पनि व्यस्ततामा कुनै कमी नआएकी अभिनेत्रीमा पर्छिन्, केकी अधिकारी । फिल्म ‘स्वर’ बाट अभिनयमा डेब्यू गरेकी यी सुन्दरीले एक दशक लामो फिल्मी करिअरमा पहिलो हिट फिल्म दिइन्, ‘छ माया छपक्कै’ । २५ वटा सुपरफ्लप फिल्मपश्चात् उनको खातामा हिट फिल्म परेको हो । यद्यपि, यो फिल्म हिट भए पनि उनले क्रेडिट भने पाइनन् ।
एकपछि अर्को फिल्म असफल हुँदा पनि व्यस्त रहेकी केकीलाई फिल्म ‘छ माया छपक्कै’ को सफलतापछि झन् भ्याइनभ्याइ छ । हाल चर्चामा रहेको कमेडी रियालिटी शो ‘कमेडी च्याम्पियन’ की निर्मात्री समेत रहेकी उनी गएको एक महिनादेखि फिल्म ‘झिँगेदाउ’ को छायांकनमा व्यस्त थिइन् । यो फिल्मका कारण उनले साइन गरेको फिल्म ‘चालबाज’ समेत छाड्नु परेको थियो ।
‘मेरो डान्स कप’ मा अभिनेत्री केकी निर्णायकको भूमिकामा छिन् । राम्रो पारिश्रमिक लिएर उनी यो रियालिटी शोमा निर्णायक बन्न लागेको जानकारी प्राप्त छ । ‘झिँगेदाउ’ पछि केकी फुर्सदिलो हुने कतिपयको अनुमान थियो । तर, यो फिल्मको छायांकन सकिए लगत्तै अमेरिका उड्न लागेकी उनलाई अझै केही समय भ्याइभ्याइ हुने देखिन्छ । भाग्य चाहिँ लिएरै आएकी हुन् केकीले !
पार्टीभित्र गुट र यस्तै कि’चलो भैरहे कांग्रेसमा भोटहाल्न मेरो हात पनि काँ’प्छ : सुजाता कोइराला